LAKROA VOLAMENA (LA CROIX DORÉE) - Fihavaozana Karismatika katôlika fiombonana
Home »LAKROA VOLAMENA (LA CROIX DORÉE)
LAKROA VOLAMENA (LA CROIX DORÉE)
Ny fijoroana ho vavolombelon’ny Olontsambatra Papa Joany Paoly II no raisiko ho fototra iaingana raha hiresaka amintsika karismatika katolika Fiombonana mikasika ny fitoriana ny vaovao Mahafaly amin’ny fomba sy endrika vaovao aho. Aoka hataontsika an-tsaina mandrakariva fa ny fitiavantsika an’Andriamanitra sy ny Fanahy Masina dia tokony hihavao mandrakariva. Miezaka isika mba hisokatra bebe kokoa amin’ny Fanahy Masina amin’ity taona ity, noho izany indrindra no andraisantsika ho teny faneva izay hita ao amin’ny Md Joany 15, 8 manao hoe : « Ho voninahitra ho an’ny Raiko raha mamoa be ianareo ». Namangy ny ondriny tamin’ny firenena maro ny Papa Joany Paoly II nandritra ny 25 taona naha Papa azy ary nihaona sy nandray tanana karazan’olona maro. Tamin’ireny fitsidihany ireny dia nananany tombom-pitia manokana ny madinika sy ny mahantra ary ny mijaly antsointsika amin’ny teny frantsay hoe « option préférentielle pour les pauvres ». Isaky ny mandeha izy dia azo lazaina fa fahombiazana hatrany no hita amin’ireny diany ireny. Mety hiteny isika hoe : « koa izy anie no Papa e », tsy izany anefa fa tamin’ireny diany ireny dia nangata-bavaka mandrakariva tamin’ireny olona antsointsika hoe madinika ireny izy.
Tato ho ato izay, dia tsapako fa mafy sy sarotra ho ahy mihitsy ny maha-aomônie nasionaly ahy noho ny trangan-javatra maro samihafa. Tao anatin’izany fahasahiranako izany dia nifandray an-telefonina tamin’ny anabaviko any Pologne aho, anabaviko izay tena marary mafy. Tao anatin’ny resakay mianadahy dia nolazaiko azy hoe : « Modesta a, azafady mba atolory ny ampahan’ny fijaliana izay iaretanao, mba ho an’ny fihavaozana karismatika katolika eto Madagasikara, mba handroso sy mba hanavao ny Fiangonana tokoa ity vondrona ity. » Hatramin’izao dia tsy mbola nanokana izany ho antsika fihavaozana izy mba ho an’ny fanjakan’Andriamanitra. Dia tonga tao amiko hevitra anankiray, izay inoako fa bitsiky ny Fanahy Masina dia ny hamorona ny apostolan’ny CROIX DOREE eo anivon’ny fikambanantsika. Fiantsoana ireo marary sy mijaly mba hiombona amintsika amin’ny fitoriana ny vaovao Mahafaly sy ho fanavaozana ny Fiangonana.
Ity zana-pikambanana ity dia ao anatin’ny ministeran’ny fitondrana am-bavaka (intercession). Mino aho fa hitondra antsika amin’ny fisokafana bebe kokoa amin’ny finoana ity hevitro ity. Mety hametra-panontaniana isika hoe inona no hoentin’izany ato amin’ny fitondrana am-bavaka ? Mety hahaomby ve izany ?
Mba hahomby sy ho marina ny vavaka dia tsy maintsy atao anatin’ny fanekena sy fiekena ny sitrapon’Andriamanitra. Ny ohatra velona ary efa mahazatra antsika dia ny hitantsika teo amin’ny fiainan’i Jesoa : tao Getsemania, teo ambony hazofijaliana, teo Golgota. Matoa mahomby ny vavaka ataonao dia mirakitra fanolora-tena ny vavaka ataonao, ary koa manaiky an’Andriamanitra ianao. Raha te hahomby ihany koa ny vavaka dia mila fandavan-tena. Matetika ny olona ao anatin’ny fijaliana sy ny aretina ary ny fahakiviana dia tsy mahateny kanefa izy dia afaka manolo-tena amin’Andriamanitra ao anatin’izay fahalemeny sy fijaliany izay hoe : « Ity aho ry Tompo manolotra ny tenako manontolo ho Anao. »
Aoka hiraikitra ao an-tsaintsika mandrakariva ny ohatra nomen’i Kristy antsika. Nandritra ny fiainany tety an-tany dia tsy nitsahatra nanao ny tsara izy. Izay rehetra nataony : fampianarana, fihetsika, fanasitranana dia nentiny namonjena antsika. Ny fara-tampon’ireny asa sy fampianarana ireny dia ny fanolorany ny tenany teo ambony hazofijaliana. Azoko lazaina fa ny telo andro farany niainany no namondrona ny fiainany nandritra ny 33 taona. Azontsika raisina ho lesona lehibe eo amin’ny fiainantsika ny fanolora-tenany. Rahefa manolotra ny sedra, ny fijaliana, ny aretina amin’Andriamanitra isika dia mahery ny vavaka ataontsika. Haintsika ve noho izany ny manaiky an’Andriamanitra ao anatin’ny fijaliana ?
Ny apostolan’ny Croix dorée dia manokatra ny masontsika mba hahalala misimisy kokoa ny lanjan’ny fijaliana atolotsika an’i Jesoa ho zary fototry ny fahombiazana sy fototry ny fibebahan’olona maro ary koa mba ho hery hoentintsika manohitra ny herin’ny ratsy. Ny fahaizantsika manolotra ny fijaliana dia manampy antsika hiroso lalindalina kokoa amin’ny fanolora-tena manontolo amin’Andriamanitra.
Mba handraisana ny fijaliana sy hiombonantsika amin’ny fijalian’ireny havantsika marary sy mijaly ireny no nahatonga ahy hamorona ity apostolan’ny Croix dorée ity. Amin’ny alalan’ity apostola ity, dia hiezaka isika mba hampandray anjara, ireo marary sy mijaly ireo amin’ny asa famonjena izay ataontsika karismatika katolika eto Madagasikara. Matetika ireny olona ireny dia tsy afa-mihetsika eo am-pandriana ary mahatsiaro tena mijaly samirery sy voahilikilika. Tiantsika noho izany ny hiombona amin’izy ireny sy hankahery azy fa ny zavatra iaretany dia manan-danja be eo anatrehan’Andriamanitra raha toa ka tena manolotra ny tenany ho famonjena ny hafa izy.
Asaintsika izy ireo noho izany mba hiombona amintsika karismatika amin’iny manjo azy ireo iny. Izy ireo no anankinantsika ny andraikitra sy apostola sarotra ho an’ny Fihavaozana Karismatika Katolika eto Madagasikara sy ho an’ny Fiangonana maneran-tany. Mba hampandehanana ity apostola ity dia iangaviako ianareo mpiandry ondry (berger) rehetra mba hanentana ireo marary manodidina antsika sy ny gropy. Manendre olona mba hampita sy hampiditra azy ireny eo anivon’ny fikambanantsika Fiombonana. Tonga ny fotoana koa handeha hiroso mba hamokatra ny finoantsika.